Noorweey oo dooneeysa ineey macnuucdo wadaadada muslimiinta ee dalkaasi booqda | Somaliska
Noorweey oo dooneeysa ineey macnuucdo wadaadada muslimiinta ee dalkaasi booqda
Dalka Noorweey waxaa maalmahan ku sugnaa wadaadka soomaaliyeed ee caanka Saciid Raage, halkaas oo muxaadarooyin diini ah ku qabanayey masaajidada kala duwan ee soomaalida Noorweey. Saas oo ay tahay waxaa mooda booqada Sheekh Saciid in xiiso gooni ah ku heeyso saxaafadda maxaliga ee dalkaasi.
Sheekh Saciid Raage ayaa wargeysyadda ku fiiqeen farta iyagoo ku tilmaamaya inuu yahay shaqsi u jan jeera kooxaha mayalka adag, islamarkaasina aaminsan mabaa’diida ah in la dili karo shaqsiga diinta Islaamka caaya. Singre Bangstad oo ah cilmbaare xagga diimaha iyo bulshadda ku xeel dheer oo la hadlay wargeys ka soo baxa gobolka Stavanger ee dalkaasi Noorweey ayaa u sheegay in sheekh Saciid hadalo iyo qoraaladiisu yihiin kwo jan jeera kooxaha xagjirka ah.
Saxaafadda gobolkaas ayaa weerar afka ku qaaday sheekha iyagoo sadarada ku muujiyey iney jiraan cadeeymo ah in sheekhu sheegay “in haweenku aannu albaabka bixi karin haddii ay dani bado mooyee (Iygagoo aan ruux muxrim ah la socon). Sidoo kalena qaba in la dilo dadka diinta caaya”.
Wargeyska lugu magacaabo Rogalandavis oo ka soo baxa gobolka Stevangar ayaa booqashada sheekh Saciid waxaa uu saaray diiradda, wareysi uu wargeyskaasi la yeeshay haweeneyda wasiiradda uga ah laanta socdaalka dalkaasi Sylvi Listhaug, ayaa u sheegtay in hadaladda laga sheegayo sheekha ee yihiin cabsi leh oo ay ku dheehan tahay xagjirnimo, islamarkaasina ay diyaarinayaan waa sida ay hadalka u tiriye liis ay ku qoran yihiin shaqsyaad ay doonayaan ineey ka mamnuucaan dalkaasi kuwaas oo loo arko ineey yihiin kuwo aaminsan afkaaraha kooxaha mayalka adag.
Ugu dambeyntiina skheekh Saciid Raage oo ka mid ah culimadda soomaaliyeed ee lugu tiriyo kuwa casriga ah ama qunyar socodka ah ayaa haatan booqosho ku jooga dalkaasi Noorweey oo muxaaradooyin ku qabtay. Booqashadda sheekhan ayaana dhalisay guux la xirriira iyo fikirkiisa diinta Islaamka.
Masjid ku yaala Stockholm oo muslimiinta laga xirtay